Imiceli mngeni yokuThengisa ngokuZenzekelayo kwabaThengisi, abaThengisi, kunye neeCEO (Idatha + yeNgcebiso) | Martech Zone
Ukuzenzekelayo kwentengiso kusetyenziswe yimibutho emikhulu okoko yabakho ebomini. Le nto yenze uphawu lwayo kwitekhnoloji yentengiso ngeendlela ezininzi. Izisombululo zakwangoko (kwaye ubukhulu becala zisekhona) zazomelele, zinobutyebi, kwaye ngenxa yoko zintsonkothile kwaye zibiza. Zonke ezi zinto zenze ukuba kube nzima kwiinkampani ezincinci ukuphumeza ukuthengisa ngokuzenzekelayo. Nokuba ishishini elincinci linokufikelela kwintengiso yesoftware banobunzima bokufumana ixabiso lokwenyani kuyo.
Le meko yandikhathaza kuba amashishini amancinci anezixhobo ezinqongopheleyo anokuzuza ngokwenene ekusebenziseni ukuthengisa ngokuzenzekelayo. Ukusetyenziswa okuzenzekelayo kunokunyusa imveliso kwaye ngenxa yoko kungeniso lukhulu. Ngelishwa, uninzi lwezisombululo ezikhoyo azilungelanga amashishini amancinci.
Ke, njengomthengisi kwintengiso ye-imeyile ezenzekelayo kwinkampani ye-SaaS, ndaziva ngathi ngumsebenzi wam ukufumana izinto abathengisi abanobunzima kuzo. Ndiyenzile loo nto ngokujonga ngaphezulu kweengcali ezili-130 ezisebenza kwintengiso.
Kodwa ndaziva ngathi ayonelanga. Ndifuna ukwaba konke oku kuqonda kunye nedatha ke ndenza Inqaku lokujikeleza kwaye wabhala i Ingxelo enamaphepha angama-55 igcwele idatha ukwabelana ngeziphumo zam kunye nehlabathi. Eli nqaku liqaqambisa iziphumo eziphambili kunye nedatha yengxelo. Kwaye ndikhethe ezona ngcebiso zilungileyo zokuzenzekelayo zinikezelwa ziingcali ngexesha lophando lwam.
Imiceli mngeni yokuThengiswa kweNgxelo ngokuPhononongwa
Makhe sithethe kancinci malunga nokuhanjiswa kobungakanani beenkampani, isikhundla sabaphenduli kunye nemizi-mveliso abasebenza kuyo. Oku kuyakubeka yonke idatha ezayo kumxholo.
Ubungakanani beNkampani - Kuphando lwam, i-90% yabaphenduli ivela kwiinkampani ezinabasebenzi abangama-50 okanye ngaphantsi. Oku kuthetha ukuba amashishini amancinci amancinci amelwe ngaphezulu. Makhe siyiqhekeze oku kancinci. Ngaphezulu kwesiqingatha sabaphenduli (57%) basebenza kwiinkampani ezinabasebenzi abangama-2-10. Isiqingatha sesihlanu (20%) seempendulo sivela kwiinkampani ezinabasebenzi abali-11-50. Ukungeniswa kwe-17 (13%) kwavela kwii-solopreneurs.
Izikhundla - Olona ngeniso lukhulu (iipesenti ezingama-38) luvele kwiingcali ezisebenza kwizikhundla zokuKhula ezinje ngeNtengiso kunye neNtengiso. I-31% yabaphenduli kuphando lwethu ngabanini bamashishini. Ikota yabathathi-nxaxheba (25%) zii-CEOs. La maqela mathathu athabatha i-94% yezingeniso.
Amashishini - Ukuhanjiswa kwamashishini phakathi kwabaphenduli kuxhomekeke ekuThengiseni, nge-47%. Oku bekuyinjongo ngenjongo yokuba siqokelele idatha ukuze malunga nesiqingatha sabaphenduli sibe sivela kumzi mveliso wentengiso. Umzi mveliso woPhuhliso lweSoftware ungene kwindawo yesibini kuphando, nge-25% yezingeniso ezivela kolu shishino.
Yonke le datha imnandi kakhulu, kodwa uze apha uza kufunda malunga nemiceli mngeni yokuthengisa, andithi? Ke masifike kuyo!
Eyona mingeni mikhulu yokuThengisa
Kuvavanyo lwethu, i-85% yabaphenduli basebenzise uhlobo oluthile lokuzenzekelayo kwentengiso.
Owona mceli mngeni uxhaphakileyo abajongana nawo abantu ngokuthengisa izinto ezizenzekelayo kudala oomatshini abazenzekelayo, nge-16% yabaphenduli bayikhankanyayo
Ngokusekwe kwidatha yethu, ukudityaniswa (iipesenti ezili-14) lolunye ucelomngeni kubasebenzisi abajamelana nobuchwepheshe bokuthengisa oomatshini.
Ukuzenzekelayo kwentengiso kufuna umxholo omninzi. Akumangalisi ukuba ukudala umxholo kufike kwindawo yesithathu, nge-10%.
Ukuzibandakanya (8%) ngomnye umceli mngeni omkhulu kwaye unxulumene ngokusondeleyo nomxholo. Ukuzenzekelayo kufuna umxholo okwinqanaba eliphezulu ukuqhuba ukuzibandakanya.
Ukwahlulahlulwa, ukulawulwa kwedatha, kunye nokwenza into ngokuchanekileyo kukhankanywe yi-6% yabathathi-nxaxheba njengomceli mngeni wokuthengisa.
Ukufumana izixhobo (iipesenti ezintlanu), ukwenza umntu (5%), ukukhokela amanqaku (5%), uhlalutyo (5%), ukunika ingxelo (4%), kunye nokuhanjiswa (3%) zonke zikhankanyiwe njengomceli mngeni kwezinye zeengcali ezivavanyiweyo .
Ukuza, siza kujonga ukuba le miceli mngeni yahluke njani phakathi kwamanqanaba amabini ezikhundla: Ukukhula (ukuThengisa kunye nokuThengisa) kunye nee-CEO.
Imiceli mngeni yokuThengisa ngokuZenzekelayo yaBantu kwiiNdawo zokuKhula
Olona celo mngeni lukhankanyiweyo rhoqo kunye nabathengisi abanalo kukuzenzekelayo (iipesenti ezingama-29), ngomda ophezulu
Ukudityaniswa ngomnye umngeni ophambili kwiingcali kwizikhundla zokukhula zijongana nentengiso ezenzekelayo, kunye ne-21% yabaphenduli abayibonisayo.
Ukudala umxholo weza kwindawo yesithathu nge-17% yeengcali zokukhula ziyikhankanya.
Isahlulo sikhuliswe yi-13% yabaphenduli abavela kwiindawo zokukhula.
Ulawulo lwedatha kunye nokufumana amanqaku kukhonjisiwe njengemiceli mngeni yi-10% yabathathi-nxaxheba.
Eminye imiceli mngeni echazwe rhoqo ibandakanya: ukwenziwa (6%), ukwenziwa komsebenzi (6%), ukuzibandakanya (4%), izixhobo zokufumana (4%), uhlalutyo (4%), kunye nokunika ingxelo (2%).
Imiceli mngeni yokuThengisa ngokuZenzekelayo kwee-CEO
Ukuntsokotha kwentengiso ezenzekelayo ngumceli mngeni wokuqala kwii-CEO, nge-21% yabathathi-nxaxheba kwezi zikhundla bayinyusayo
Kwiinkampani ezincinci nezincinci, ihlala ili-CEO ethatha isigqibo sokuba yeyiphi indibaniselwano yesoftware esebenzisa inkampani. Ke, ayimangalisi into yokuba ukudityaniswa (i-17%) kunye nokufumana izixhobo (i-14%) kuyimingeni ebalulekileyo kubo.
Ukuqhuba kokuzibandakanya kwimiyalezo yentengiso ezenzekelayo kuboniswe njengomceli mngeni yi-14% yee-CEO.
Ukwenza oomatshini bokuzenzekelayo (i-10%) kukhankanywe kancinane kakhulu zii-CEO kunabaqeqeshi ngokukhula kunye nabanini bamashishini. Isizathu soku kukuba uninzi lwee-CEO azijongani nokwenza i-automation.
Ulawulo lwedatha kunye nokwenza ngcono bobabini bakhuliswe yi-10% yabaphenduli kwiindima ze-CEO.
Eminye yemiceli mngeni engachazwanga kangako yee-CEOs yenza umxholo, ubuqu, ukwahlulahlula, ukunika ingxelo, kunye nohlalutyo, nganye kwezi ivele kwi-7% yeempendulo.
Ingcebiso ngokuThengisa ngokuZenzekelayo kwiiNgcali kunye neempembelelo
Njengoko benditshilo sikwabuza nabasebenzisi bokuthengisa abazenzekelayo
“Ungathini kumntu oqala nje ukuzithengisa? Yintoni ekufuneka eyiqwalasele? ”.
Ndikhethe ezinye zeyona mpendulo zibalaseleyo, ungafunda zonke izicatshulwa kulo mjikelo.
I-SaaS guru kunye noMsunguli we-SaaS Mantra, uSampath S uthi xa kuziwa kuthengiso lwabaqalayo abazenzekelayo kufuneka bagxile koku:
URyan Bonnici, i-CMO ye-G2Crowd ikwabelane nabanye ngeengcebiso ezintle abathengisi kufuneka baqwalasele ekuqaleni:
UMseki weGhacklabs, uLuka Fitzpatrick ubalaselisa ukubaluleka kokuchukumiseka komntu kwintengiso ezenzekelayo:
U-Nix Eniego, iNtloko yeNtengiso kwi-Sprout Solutions ucebisa abo baqala ukuzithengisa ukuba bagxile kwiziqhamo ezijingayo ezisezantsi kunye nokuphuhlisa isikhokelo ngokubanzi ngaphambi kokutsiba kwi-nitty-gritty.
Masikhe siphinde sibuyekeze eyona mingeni iphambili. Xa kuziwa ekuthengiseni abasebenzisi be-automation kwiindawo zabo zokukhula eyona miceli mingeni mikhulu yile:
Ukwenza oomatshini bokuzenzekelayo
Kwelinye icala, ii-CEO ezisebenza ngokuthengisa okuzenzekelayo zikufumanisa kunzima:
tags: ukudala ukuthengisa okuzenzekelayoukuzenzekela ngokuzenzekelayoImiceli mngeni kwezentengisoukuthengisa ukuzenzekelayoumxholo wokuzenzekelayo wentengisoukuthengisa umxholo wokuzenzekelayoukuhlanganiswa okuzenzekelayo kwentengisoamaqonga ezentengiso okuzenzekelayoizixhobo zokuthengisa ezizenzekelayo
UMór Mester yiNtloko yeNtengiso kwi Automizy, kulula ukuyisebenzisa ukuthengisa i-imeyile ngokuzenzekelayo i-SaaS. Umsebenzi wakhe kukunceda amashishini amancinci kunye neearhente zisebenzise ukuthengisa ukuzenzekelayo ukwandisa imveliso kunye nengeniso ngenxa yoko.